FITIA BOUTIQUE: 150.000 Ariary monja ny « brosses à lisser». | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE FITIA BOUTIQUE: 150.000 Ariary monja ny « brosses à lisser».
A LA UNEACTUALITEECONOMIEPUBLI REPORTAGE
FITIA BOUTIQUE: 150.000 Ariary monja ny « brosses à lisser».
By Nirinamai 24, 2017, 06:25 0
Amin’izao fetin’ny reny izao, tolotra miavaka no atolotry ny Fitia Boutique amin’ireo fitaovana fikirakirana ny taovolo hiaka farany. Anisan’izany ny «brosses à lisser ». Raha 200.000 Ariary ny vidin’ny “ brosses à lisser ”… amin’ny andavananfadro, nidina ho 150.000 Ariary izany. Fitaovana vaovao entina hanamorana ny fanatsorana volo izy ity. Hoatra an’ireny fibangoana volo ireny ihany ny fampiasana azy. Nambaran’ny Tomponandraikitra ao amin’ny Fitia Boutique, Nathalie HANITRINIAINA fa matihanina avokoa ireo fitaovana varotan’ny tranombarotra.
Mampiavaka io fitaovana io ihany koa akora nanamboarana azy. « Tsy atahorana hanimba volo ny fampiasana ny « brosses à lisser» satria « céramique » sy « ionique ». Hatramin’ny asabotsy 27 May 2017, amidy amin’ny vidiny mirary ireo karazana « brosses à lisser».
Marihina fa ankoatra ny « brosses à lisser» , ahitana fihenam-bidy ihany koa ireo fitaovana hafa fikirakirana taovolo. Eny amin’ny Fitia Boutique, Box A5 ao amin’ny New Century Soarano no fotoana ho an’ireo izay liana fa indrindra te hanolotra fanomezana ho an’i Neny.
Previous PostVONDRONA AFRIKANA: Atao vain-dohan-draharaha ny fampanan’asa ny tanora. Next PostVEHIVAVY ASTAFIM: Manampy ny vehivavy hivelatra amin’ny sehatry ny asa.